अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा नेपालीमाथि आ’क्र’मण, आईसीयुमा उपचार हुँदै – नेपाली सूर्य
अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा नेपालीमाथि आ’क्र’मण, आईसीयुमा उपचार हुँदै
November 11, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा नेपालीमाथि आ’क्र’मण, आईसीयुमा उपचार हुँदै
अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा एकजना नेपालीमाथि आ’क्र’म’ण भएको छ । कामबाट घर फर्कने क्रममा मेरिल्याण्ड राज्यको प्रिन्स जोर्ज काउन्टी अन्तर्गत टेम्पल हिल सिटीमा बेलुका सबा सातबजे तिर्थ सेवामाथि आ’क्र’म’ण भएको हो । उहाँको अहिले मेरिल्याण्ड राज्यको प्रिन्स जोर्ज काउन्टी हस्पिटलको आईसीयुमा उपचार भइरहेको छ ।
आ’क्र’म’णकारीले उहााको टाउकोमा धा’रिलो ह’ति”यारको प्र’हार गरेको थियो। आक्रमणबाट उहााो टाउकोमा गम्भीर चोट लागेकाले अस्पताल लैजाने बित्तिकै टाउकोको सर्जरी गरिएको थियो।
अस्पतालका अनुसार तुरुन्त सर्जरी गरिएकोले अहिले उहाँ ख’त’रामु’क्त हुनुभएको छ । तर अस्पताल ल्याउनु अगाडि नै धेरै रगत बगेकोले उहाँको दायाँ हात अझै चलेको छैन।
टाउकोमा ३० भन्दा बढी टाँका लगाइएको छ। उहााको अवस्था ख’त’रामु’क्त भएपनि सामान्य अवस्थामा पुग्न निकै समय लाग्नसक्ने चिकित्सिकले बताएका छन् ।
नजिकैको मलको एक कपडा पसलमा काम गर्ने उहाँमाथि आ’क्र’मण किन र कसले गर्यो भन्ने अझै खुलेको छैन। प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ।
हिडिरहेको बेला अचानक दुइवटा गाडी नजिक आएर रोकिएको रएकजना व्यक्ति गाडीबाट बाहिर निस्केर गोजीबाट धा’रिलो ह’तियार निकाली टाउकोमा प्र’हार गरेको सँगै रहेका बंगालादेशी साथीले बताएका छन् । दुईतीनपटक हान्ने बित्तिकै तिर्थ सेवा बाटोमै ढलेपछि आ’क्र’म’णकारी नजिकै रोकिरहेको गाडीमा चढेर भागेको बताइएको छ ।
बंगालादेशी साथीले तत्काल प्रहरीलाई फोन सम्पर्क गरेर जानकारी दिएका थिए । पाँचसात मिनेट पछि प्रहरी घटनास्थलमा आएको थियो । त्यसपछि तिर्थ सेवालाई अस्पताल लगिएको थियो । सन् २०१५ देखि अमेरिका बस्दै आउनु भएको सेवाको परिवार नेपालमै छन्। khasokhas
लोक सेवाले यस्ता पदका लागि जागिर खुलायो, मंसिर १६ सम्म दिन मिल्छ निवेदन !
Breaking News: रामदेवको टीभीमा विभागको ‘छापा’, कागजातहरू नियन्त्रणमा
November 22, 2021 Nepali Surya
काठमाण्डौंको कपनबाट हराएका चार बर्षिय बालक एकाएक कसरी पुगे भारत?
रुखमा डेरा बनाएर अनलाइन पढेका धनकुमारको गाउँमा पुग्याे फाेरजी सेवा
October 5, 2021 October 5, 2021 Nepali Surya